Hotel Kitchen Machine - BaganMart
Chemical Tank LCT-S
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 4059 view counts
Brand : ou lee kitchen
Model : HD-05
လုပျငနျးအမညျ : Creative Line Co.,Ltd Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : 09 421158666၊09 421159666၊09 73007588၊01-642115
Power : 220v/50hz 1.0kw /1.4kw /1.8kw
Type: : Hot-dog Grill Machine
Dimensions: : 585x225x190mm
Color : : stainless steel
All stainless steel body with special long rollers (front and back ). Switch and thermostat control front and back rollers separately. With fast heating and working efficiency for the hot dog processing System.
ခေတ်မှီဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်း၊ အရည်အသွေးမြင့်ကုန်ပစ္စည်း၊ သင့်တင်မျှတသောဈေးနှုန်းများဖြင့် လူကြီးမင်းတို့မီးဖိုဆောင်ကိုအလှဆင်လိုပါသလား။ မြန်မာပြည်ရဲ့(10)နှစ်တာရှင်သန်မူ သက်တမ်းရှိစူပါစတားများနှင့် အဆင့်မြင့်တိုက်တာအိမ်ရာများ၊ အနှစ်သက်ဆုံးသော Qu Lee Kitchen Decoration နှင့်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ လိုအပ်သောအိမ်သုံးမီးဖိုဆောင်ပစ္စည်းများကိုလည်းတစ်ပါတည်း စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိင်ပါသည်။ သေသပ်လှပပီးစနစ်ကျသောအ၀တ်လဲခန်းနှင့်အ၀တ်ဘီရိုများအားလူကြီးမင်းတို့ လိုချင်သောဆိုဒ်၊ဒီဇိုင်းများဖြင့်ပြုလုပ်ပေးနိင်ပါသည်။ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်ကြီးများရဲ့လက်သုံးအရည်သွေးမြင့်အမျိုးစားစုံလင်သောလုပ်ငန်း သုံးမီးဖိုဆောင်ပစ္စည်းကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ CREATIVE LINE Co.,Ltdမှဈေးနှုန်းသက်သာစွာရောင်းလျပေးလျက်ရှိပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ဝယ်ယူလိုပါကချက်ချင်းဆိုသလိုဆက်သွယ်မှာယူလိုက်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
For Hotel Kitchen Machine
May I get the quotation for "Hotel Kitchen Machine" ?